Home XIRIIRKA IYO GUURKA Waxyaabaha Qofna Uusan Kuu Sheegi Doonin Ee Ku Saabsan Qiyaanada Jacaylka
Qiyaanada Jacaylka waxay xanuun iyo saameyn weyn ku yeelataa qof kasta oo la kulmay. Helitaanka qof aad wada qaadataan inta noloshiina ka dhiman waa dareenka ugu wanaagsan ee aad heli doonto.
Si kastaba, lama hubo in dadku ay noqon doonaan kuwo isku jilicsan oo isjecel illaa geerida intay uga imaaneyso sababtoo ah qiyaano ayaa dhici karta oo ah mid kamid ah waxyaabaha sababa kala tagga ama furriinka lamaanaha.
Qiyaanada jacaylka waxay burburisaa dhammaan kalsoonida aad qabtay iyadoo sababeysa inaad isku aragto qof aanan u qalmin lamaanaha kale.
Illaa markaas, ma jiro qof kuu sheegi doona waxyaabahan ku saabsan qiyaanada.
Inta ay ku dhaawici doonto
Qofna kuuma sharixi doono xanuunka la timaado qiyaanada gaar ahaan markaad sameysay wax walba ama dadaal walba oo aad sameyn kartay si aad u ilaalisay guusha xiriirka ama guurka.
Waxaad dib u eegi doontaa farriimaha aad wada wadaagteen iyo xasuusahaad wada lahaydeen adigoo dareemaya itaal gab oo xittaa aanan erey awoodin.
Mudada ay qaadan doonto inaad ka gudubto
Cidina kuuma sheegi doonto waqtiga saxda ah ee ay qaadan doonto si aad dib ugu dhisto kalsoonida aad ku qabto ruux kale.
Qaar kamid ah dadka la qiyaamay ma bixiyaan fursad kale oo lagu jeclaado sida ay horey u sameeyeen oo kale halka kuwo kale ay si dhaqsi ah uga soo kabsadaan taasoo ku saleysan inta ay xiriir ku jireen.
Sida cad ee lamaanahaagu u inkiri doono runta
Qofna makuu sheegi doono in qofka aad jeceshahay aanan marnaba laga yaabin inuu isdhiibo si uu kuugu sheego xaqiiqada kadambeysa dhagar uu kugu sameeyay.
Xittaa haddii lamaanahaaga uu ku qiyaanay adigoo hortaagan oo arkaya lagama yaabo inuu isdhiibo, isaga/iyada waxay u diidi doontaa waxay sameysay waxayna u dhaqmi doonaan si kale si ay u joojiyaan ka hadlidda arrintaas.
Previous articleDaawo: Fanaaniinta Maxamed Cirro Iyo Cabdiraxmaan Oday Oo Ka Hadlay Weerarkii Lagu Qaaday
Next article3 things to never say to your spouse during a fight
Fanaan hore Axmed Biif oo muxaadaradii u horeysay ku qabanaya masjid...